Isbedelka Gurmadka Booliska - City of Minneapolis
Isbedelka Gurmadka Booliska
Waxaanu ka shaqeyneynaa hab cusub oo lagu balaariyo gurmadka xaaladaha la soo codsado gargaarka, gaar ahaan gurmadka la xiriira cudurada dhimirka.
Waa in la horumariyaa nidaamka gurmadka ee magaalada si wax looga qabto baahida dhamaan dadka degan magaalada. Xoga laga soo ururud ay dadka Madowga ah, dadka asal ahaan waddanka loogu yimid iyo kuwa laga tirada badan yahay (BIPOC) ayaa lagu ogaaday:
BIPOC waa 37% tirada dadka ku nool Minneapolis
BIPOC waxa ay 52% ka yihiin dadka soo codsada xaaladaha la xiriira gurmadka dhimrika.
Waxaanu abuureynaa barnaamij tijaabo ah oo:
Si gaar ah gurmad loola beegsanayo codsiyada gurmadka ee dada madaxa ka jiran la xiriira.
Lagu tababaro shaqaalaha ka jawaaba telefoonada qiimeynta codsiyada la xiriira cudurada dhimirka.
Xirfadlayaasha cudurada dhimirka oo ka hawlgala waaxda 911
Sidii si wanaagsan loogu gurman lahaa xaaladaha caafimaadka dhimirka ee bulshada BIPOC iyo dhamaan dadka deggan magaalada.
Waxaanu bilaabeynaa in cabashooyinka qaarkood lagu soo gudbiyo barta internetka ama 311. Marka ay doonayaan in ay soo gudbiyaan mid ka mid ah dacwadahaas waxaa lagula talinayaa in ay dacwadooda ku soo gudbiyaan barta internetka ama wacaan 311 :
Dacwadaha goobaha gaadiidka la dhigto
Dacwadaha kale – telefoon kaliya
Codsiyada Gurmadka Xaaladaha Dhimirka
Haddii ay jirto xaalad u baahan gurmadka cudurada dhimirka Minneapolis gudaheeda, waxa aad weli soo wici kartaan:
Kooxda Guurguurta ee Gurmadka ee Degmada Hennepin:
612-596-1223 (dadka waaweyn ee ku sugan Degmada Hennepin)
612-348-2233 (ilmaha da’doodu ka yar tahay 17 ama ka yar)
Macluumaad ku saabsan kooxda guurguurta ee adeegga gurmadka
Sanadka 2021, laba kooxood oo cudurada dhimirka ayaa u hawlgalaya codsiyada gurmadka 24/7. Waxa ay taasi ka dhigan tahay:
Ciidamada boolisku uma gurmanayaan xaaladaha gurmadka ee la xiriira cudurada dhimirka.
Waxaa suurogal ah in boolisku ka qeyb qaato gurmadka haddii kooxda gurmadka dhimirka ay labaduba ka qeyb qaadanayaan gurmadka.
Waxaa laga yaabaa in wax laga bedelo xaaladaha gurmadka dhimirka sanadka 20200. Barnaamijka tijaabada ah ee gurmadka xaaladaha dhimirka ee 2021 ayaa lagu qiimeynayaa talaabada xigta.
Codsiyadaha Gurmadka ee tuuganimada iyo burburka hantida
Si aad uga dacwooto tuuganimo ama burbur loo geystay hanti, waxa aad:
Soo wac Minneapolis 311
Dacwadda ku soo gudbi barta internetka
Ku soo gudbi bart6a internetka
Barnaamijka cusub ee gurmadka
Tijaabada 1 - Isticmaalka kooxaha guurguura ee gurmadka xaaladaha dhimirka
Waxaanu maalgelin ku sameynay afar barnaamij oo tijaabo ah sanadka 2021.
Kooxo aan aheyn booliska ayaa u gurmada xaaladaha degdegga ah ee dhimirka. Kooxaha waxaa ka mid ah dhakhaatiirta cudurada dhimirka oo ay ka mid yihiin EMT/EMS.
In dadka madaxa ka jiran loo helo hab kale oo loogu gurmado oo ka duwan in booliska loogu yeero.
In la qiimeeyo baahida iyo u fidinta daryeelka iyo gargaarka ay u baahan yihiin.
In laga hortago dhigitaanka isbitaalka ee aan loo baahneyn ama in lagu soo oogo dacwad.
Tijaabada 2 - Tababar loo fidiyo shaqaalaha 911 si ay u qiimeeyaan codsiyada la xiriira cudurada dhimirka
Qaar badan oo ka mid ah shaqaalaha iyo horjoogayaasha 911 waxaa la siinayaa tababar la xiriira xaaladaha dhimirka. Waxaanu qiimeyneynaa waayo aragnimadooda ka hor inta aan tababarka loo fidin dhamaan shaqaalaha gurmadka.
In la siiyo shaqaalaha 911 tababarada ay u baahan yihiin si ay qiimeeyaan codsiyada la xiriira dhimirka.
In ay u diraan gurmadka kooxda ugu dhow ee gurmad u fidin karta.
In la siiyo macluumaad aad u qiimo badan la xiriira cudurada dhimirka iyo dabeecadda.
Tijaabada 3 - In la isku xiro shaqaalaha cudurada dhimirka iyo 911
Laba ka tirsan shaqaalaha cudurada dhimirka ayaa la shaqeynaya shaqaalaha ka jawaaba telefoonada iyo kuwa gurmadka.
Horumarinta kalkaalisada xaaladaha dhimirka
Taleefanada oo laga soo weeciyo waaxda booliska
Garashada sida ugu haboon ee loogu gurmado xaaladaha la xiriira dhimirka.
In codsiyada 911 ee la xiriira dhimirka laga wareejiyo booliska.
Aqoonsiga gurmadka ku haboon ee dadka u baahan gurmadka.
Horumarinta adeegga kalkaalisada caafimaadka ee heerka gurmadka.
Tijaabada 4 - Ku tababarka shaqaalaha rayidka qoritaanka warbixinada iyo ururinta cadeymaha ee dambiyada tuuganimada iyo burburka hantida
Shaqaalaha magaalada ayaa qoraya warbixinta tuuganimada iyo burburka gaara hantida ee dadka degan Minneapolis:
Shaqaaluhu ma aha saraakiil boolis ah.
Mas’uuliyaddan waxaa la hoos geyn karaa jagooyinka iminka jira ama ay qeyb ka noqon karaan jago cusub.
In loo soo diro shaqaale taga oo u gurmada tuuganimada iyo burburka hantida ma guurtada ah.
In boiliiska uu helo waqti dheeraad ah.
Wajiga qorsheynta (3-4 bilood)
Waxa aynu go’aan ka gaareynaa sida shaqaalaha loogu qorayo barnaamijka tijaabada ah iyo dhinacyada ka qeyb qaaadanaya.
Wajiga tijaabada (4-6 bilood)
Waxa aynu arkeynaa sida wajiga tijaabadu u shaqeeyo iyo isbedelka loo baahan yahay in la sameeyo. Taasi waxa ay inoo ogolaaneysaa in la sameeyo laba isbedel inta lagu jiro mudadaas. Kooxda qaabilsan cudurada dhimirka waxa ay sii wadi doonaan hawshooda marka uu dhamaado wajigan.
Wajiga daraasad ku sameynta (1-2 bilood)
Waxaa la dhameystirayaa qiimeynta rasmiga ah iyada oo la soo saari doono talo soo jeedinta ugu dambeysa.
Soo gaarsiinta warbixinta gudiga maamulka magaalada
Waxa aynu u soo bandhigi doonaa qorshaha 2022.
Taariikhdii la soo maray
Duqa Magaalada iyo Gudiga Magaalada ayaa ogolaaday maalgelinta:
Tijaabinta hababka kala duwan ee gurmadka ee:
Codsiyada dadka qaba cudurada dhimirka
Codsiyada la soo sheego fal dambiyeed kaliya
La soo bandhigay talo soo jeedinta
Xafiiska Hawlqabadka Iyo Hal Abuurka ayaa soo bandhigay
Hababka kale ee gurnadka ee ka gudbaya xilliga tijaabada
Waxaa la dhameystiray sahanka iyo qorsheynta
Waxaa la dhameystiray sahanka bulshada
Waxaa bilowday qorshaha habka ay bulshadu adeegsaneyso ee gurmadka kala duwan.
Codsiyada gurmadka cudurada dhimirka
Telefoonada la so sheego fal dambiyeed dhacaya
La ogolaaday qorshaha lana siiyey maalgelin
Duqa iyo Guriga Magaalada
Ayaa ogolaaday hawsha guriyada qorshaha
U fidiyey maalgelin hababka kala duwan
Waxaa laabuuray gudiyada shaqada
Waxaanu abuurnay gudiyada shaqada si ay:
Daraasada ugu sameeyaan xogta
Go’aan uga gaaraan nooca telefoonaa lagu tijaabinayo hababka gurmadka ee kala duwan
Gudiga magaalada ayaa soo saaray tilmaamaha laraacayo
Gudiga Magaalada ayaa talo weydiistay Xafiiska Xiriiryaha Magaalada. Codsigoosu waxa uu ahaa in ay tilmaan ka bixiyaan halka ay Magaaladu ka heli karto gurmad aanu boolisku ka qeyb qaadan.
Xogta ugu dambeysa ee barnaamijka tijaabada ah
Xogta ugu dambeysa ee barnaamijka tijaabada ah waxaanu sanadka oo dhan dadweynaha ugu soo bandhigeynaa:
Nidaamka Macluumaadka ee Maamulka Magaalada (LIMS)
Barnaamijka You Tube
Kala soco Bogga You Tube ee Minneapolis
Xogta ugu dambeysa waxaa ka mid ah:
Horumarka laga gaaro barnaamijka tijaabada ah
Warbixin ka qorista tirada, waxyaabaha la ogaado iyo kuwa laga barto.
Isbedelka aanu sameyneyno waa mid ku saleysan waxyaabaha aan ka barano tijaabada.
Kooxda gurmadka ee cudurada dhimirka
Sidee ayaa kooxahani ugu adeegayaan deganayaasha magaalada
Xubnaha kooxda waxa ay:
Kuwa naxariis u haya dadka
Dadka ay dhibaatada heysata ula dhaqma si bini'aadminimo leh
Tababar balaaran lagu siiyo:
Gargaarka ay u baahdaan dadka madaxa ka jiran.
Dhibaatada dadka soo gaarta
Garashada qowmiyada iyo jinsiga qofka
Kooxdu waxa ay qaban karaan
La talin iyo gargaar la xiriira xagga daawada ee dadka madaxa ka jiran.
In ay dadka ku xiraan adeegyada taageera
Marka ay kooxdu u soo gurmadaan kooxdu, waxa ay dadka ka caawin karaan:
In ay qofka hubka ka dhigaan oo dharkana u xiraan
Waxa ay wataan agabka ay wax kaga qaban karaan baahida dadka dhibaateysan.
Noocyada codsiyada ay kooxdu u gurmato
Shilalka dadka qaba xanuunka dhimirka (EDP) Kooxda guurguurta ee gurmadka cudurada dhimirka waxa ay u gurmanayaan shilalka dadka madaxa ka jiran (EDP).
Inta uu socdo barnaamijka tijaabada ah, waxaanu idinla wadaageynaa gurmadka dadweynha hadba wixii ku soo kordha.
U gurmadka codsiyada wixii ka horeeyey 2021
Sida ay ahaan jirtay
Waxaa hawsha gurmadka dadweynaha waxaa u xil saarnaa Ciidamada Booliska Ee Minneapolis.
Laga bilaabo 2018kii
Maamulka magaalada ayaa abuuray guddi hawleed in ay raadiyaan hab lagu bedelo nidaamka gurmadka ee 911. Tan iyo 2018, Xafiiska Xiriiriyaha Magaalada ee Waxqabadka Iyo Hal Abuurka (OPI) ayaa hogaaminayey hawlgalkan Magaalada.
OPI waxa ay bilaabeen dib u eegis ay bulshadu xudun u tahay oo lagu bedelo gurmadka ciidamada nabadgelyada.
Gudiga Magaalada ayaa ogolaaday qaar ka mid ah talo soo jeedinta.
Akhri Wax Ka Bedelka Nabadgelyada Bulshada Iyo Qorshaha Ka Qeyb Gelinta
In deganayaasha magaalada la gaarsiiyo adeegyada ay u baahan yihiin waqtiga saxa ee ku haboon.
In laga faa’iideysto kheyraadka iminka jira ee magaalada.
In la adeegsado kheyraadka bulshada
We seek existing community providers to partner with on this work:
Waxaanu dooneynaa in hay’adaha bulshada ay ka noqdaan hawl wadaag hawshan.
Waxaa suurogal ah in aan isku dayno laba hab oo kala duwan,oo ay ka mid yihiin
In hawsha laga qeyb geliyo xirfadlayaasha aqoonta u leh dhimirka ee u heysta leesinka ee laga heli karo adeegga gurmadka degdegga ah iyo xirfadlayaal aqoon u leh.
In hawl wadaag lala noqdo hay’adaha bulshada ee ka hortagga rabshadaha.
Waxaanu adeegsan doontaa nidaamka talo soo jeedinta (RFP) si loo ogaado oo loo qiimeeyo hay’adaha ugu wanaagsan ee adeeg bixiyayaasha.
Waxaanu dooneynaa in nidaamka noqdo mid taabogal ah. Si taas loo hirgeliyo, waxaanu talo weydiisaneynaa in dhamaan hay’aduhu ka qeyb qaataan nidaamka xulashada.
Soo Booqo DataSource
Soo booqo DataSource si aad u aragto xogna ga baarato barnaamijka Magaalada Miineapolis ee xogta meel algu soo wadad ururiyey
Xoga aad ka heli karto:
Xogta dadka xiran
Xogta fal dambiyeedka
Keydka wax ka qorista hab dhaqanka saraakiisha
Toogashada saraakiishu qeyb ka yihiin